Ciidamo xalay xaafado ka tirsan Muqdisho howlgal culus ka fuliyey – Hornafrik Media Network
Ciidamo xalay xaafado ka tirsan Muqdisho howlgal culus ka fuliyey
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Gaashaan ayaa xalay hawlgal qorsheysan ka sameeyay xaafado ka tirsan Degmada Warta Nabadda ee Gobalka Banaadir iyaga oo qarxiyay laba Miino oo kuwa dhulka la galiya ah.
Afhayeenka Wasaaradda Warfaafinta dowladda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Cumar ayaa Xaqiijiyay in Miinooyinka ay qarxiyeen ciidamada Gaashaan ay ahaayeen ku aasnaa dhulka, waxayna kooxaha argagixisadu doonayeen in ay ku laayaan shacabka Soomaaliyeed.
Xaafadda Baar Ubax ee degmada Warta nabadda oo ah halka ay ciidamadu ku qarxiyeen miinooyinka ayaa waxaa laga sameeyay howlgal qorsheysan oo sidoo kale lagu bartilmaameedsaday rag la tuhun sanyahay oo ka tirsan Al Shabaab.
Ciidamada Gaashaan ayaa inta badan waxa ay fuliyaan hawlgalada qorsheysan ee lagu beegsado Xubnaha Shabaabka ka tirsan.
Inta badan Gaashaan ayaa hawlgalkooda wuxuu ku saleysan yahay mid ay ku hagaan taleefoonada gacanta ee GPRS lagu xiro.
Afhayeenka Al-Shabaab: Weerarkii Manda Bay waxuu qeyb kahaa ola-olaheena Qudus lama Yahuudeynayo
Mahdi Abu-Yaasiin, Somali-Russian-kii Daacish oo ku dhex geeriyooday xabsiga dhexe ee Xamar